Guddoomiyaha baarlamaanka oo u muuqday in uu ku guuleysanayo in ay wada hadlaan dowladda iyo midowga maxaakiimta kuna soo laabanaya magaalada Nayroobi dhawaan. Ruunkinet 11/11/06
Guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in uu qarka u saaran yahay in uu ku guuleysto in ay wada hadlaan midowga maxaakiimta iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo hoggaaminaya qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka haatanna ku sugan magaalada muqdisho ayaa shirar isdaba joog ah la galay mas'uuliyiinta golaha maxaakiimta islaamiyiinta ah ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, gudoomiyaha baarlamaanka oo horay shirar ula galay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta beesha caalamka u fadhiya magaalada Nayroobi asagoo u sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda iyo maxaakiimta wada hadlaan.
Guddoomiye Shariif ayaa inta uusan u amba bixin magaalada Muqdisho qado sharaf u sameeyay qaar ka tirsan golaha baarlamaanka ee ku sugan magaalada Nayroobi asagoo u sheegay in uu daneynayo in ay wada hadlaan dowladda iyo midowga maxaakiimta.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in guddoomiya shariif kala hadlay midowga maxaakiinta in ay ciidamadooda kala baxaan degmada Buur Hakaba si uu wada hadalka u furmo ayado wadahadlka Shariif Xasan iyo midowga maxaakiinta ay ka soo bexeen in loo baahan yahay in ciidamada shisheeye laga saaro dalka.
Dhanka kale, golaha maxaakiinta ayaa horay u diiday in ay dowladda la kulmaan inta ay Kenya ka qeyb galeyso kulanka lagu wada hadalsiinaya maxaakiinta iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayagoo sidoo kale sheegay in ay qaadacayaan wada hadalka dowladda inta ay dowladda Itoobiya kala bexeyso ciidankeeda dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo.
Cabdullahi Xuseen, Ruunkinet, London